Xubnaha cusuub ee loo qaadanayo tababarka ciidanka dab-damiska magaalada Boorama oo Lagu Kala Saaray Imtixaam. | Baadiye Media Center
Xubnaha cusuub ee loo qaadanayo tababarka ciidanka dab-damiska magaalada Boorama oo Lagu Kala Saaray Imtixaam.
Hargeysa (BMC )- Ciidanka Dab-demiska Taliska Cusub Ee Magaalada Boorama Oo Lagu Kala Saaray Imtixaam, kaasi oo ay si rasmiya uga mid noqanayaan Ciidanka Dab-demiska Qaranka Somaliland.Saraakiisha Ciidanka Dab-demiska oo uu horkacayo Agaasimaha Fulinta Ciidanka Dab-demiska Qaranka Cabdiqaadir Cumar Xaashi ayaa safar ugu kicitimay magaalada Boorama, ujeedada safarkan ayaa ahayd in Imtixaam qaran laga qaado ciidanka cusub ee Dab-demiska loo qaadanayo gaar ahaan Degmada Boorama.
Imtixaamkan ayaa waxaa u fadhiistay 65 Codsade waxaana Imtixamka ku hadhay 35 Xubnood, halka ay soo baxeen 30 Xubnood iyadoo aanay ka soo xaadirin Laba Xubnood. Imtixaamkan ayaa ka koobnaa Dhawr Qaybood ugu horayna waxaa qofka laga cabbirayaa Miisaankiisa iyo Dhererkiisa loogana baahanayahay inuu gaadho 70 Kg oo Culaysa iyo 1.75 Kg oo ah dhererka, kadib markuu imtixaamkaa ka soo gudbo ayaa waxaa uu u gudbayay Imtixaam Qoraala.
Kala Saarista imtixaamka Xubnaha soo codsaday Ciidanka Dab-demiska Boorama ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Shan Haayadood oo kala ah Maamulka Sare Ee Ciidanka Dab-demiska, Xubin ka socota Wasaarada Arrimaha Gudaha, Xubin ka socota Dawlada Hoose ee Boorama, Xubin ka socotay Kormeerka Wasaarada Waxbarashada Heer Gobo lee Boorama iyo Xubin Haweena oo ka socotahy Wasaarada Shaqada iyo Arrimaha Bulshada gaar ahaan Degmada Boorma. Waxaanay dhamaantood markhaati ka ahaayeen qaabka uu imtaaxmku u dhacaayo.
Ugu Horayn waxaa halkaa ka hadlay Taliye ku xigeenka Ciidanka Dab-demiska oo sheegay inay si caadaalada isla markaana ay ka shaqaynayeen in mudda ah sidii hawshasi u hirgali lahayd. Waxaanu taliyuhu sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in maanta si cadaalada oo loo wada dhanyahay uu ku soo dhamaado.
Agaasimaha Fulinta Ciidanka Dab-demiska Qaranka Cabdiqaadir Cumar Xaashi ayaa isna halkaa ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa “ waxaan u mahadcelinayaa bogaadinayaana dhamaan xubanaha imtixaamka galay ee reer Boorama, Haayada Dab-demisku waxay waayo arag u tahay inay sinaan iyo caddaalad iyo Xulasho aan Xal ahayn ay u marto waajibaadkeeda iyo xil gudashadeeda. Imtixamkani waa imtixaamkii afraad ee laga qaado gobolada Somaliland oo dhan waxaana boorama ka horeeyay Hargeysa, Wajaale, I yo Burco waxaanu boorama imtixaam isku daynay inaanu ka samayno laba jeer ooh ore balse may suuragalin, maanta se dadaal badan uu galay Duqa Magaalada Boorama ayaa suuragalisay in go’aankii ahaa arrintani xal maahee waa xul inuu socdo waxaanan mar labaad u hambalyaynayaa Mayorka iyo xubnaha loo qaatay Ciidanka Dab-demiska Magaalada Boorama.”
Sidoo kale Agaasimaha Fulintu wuxuu intaa ku daray in Ciidanka Dab-demiska Boorama in hadii laba walaalo ah ku soo baxaan Ciidanka dabdemiska ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan Ciidanka Dab-demiska, ugu dambayna waxuu dardaaran u soo jeediyay xubnaha cusub ee ka mid noqday ciidanka dab-demiska inay dadaal iyo karti badan sameeyaan qarankana u shaqeeyaan inta kale ee aan nasiibku u saamixin inay ka mid noqdaan ciidanka Dabdemiska Booramana ay calafkooda sugaan Haayada Dab-demiskuna ay xawaare ku socoto intana ay ka badan dooonto, waxaa kaloo agaasimuhu xusay in xarunta Ciidanka Dab-demiska Boorama sida ugu dhakhsaha badan loo dhagax dhigi doono.
Xubno ku hadlayay afka Guddida goobjooga ahayd iyo xubnihii ku soo baxay ciidanka Dab-demiska boorama ayaa sheegay in si caddaalada oo loo wada dhammaa u dhacay imtixaamkaasi ayna ku qanacsanyihiin imtixaamkaas.
Ugu dambayn Maayorka Magaalada Boorama ayaa soo gabagabeeyay Munaasibadaas waxanuu sheegay inay aad ugu mahadnaqayaan Ciidanka Dab-demiska oo maanta imtixaam caddaalada ka qaaday xubnihii soo codsaday ka mid noqoshada ciidanka dabdemiska boorama, waxaanuu maayorku sheegay inay tahay iftiin soo baxay, Haayadaha kala duwan ee dalkuna ay ku daydaan Dabdemiska.
Maayar Maydhane wuxuu sheegay in uu ku garanayo in imtixamkani caddalaad ahaa in dhawr jeeroo hore oo laysku dayay in la leexiyo shaqaalaha loo qaadanyo Dab-demisku haayadu meel adag iska taagtay arrintaas.
Waxaa xusid mudan in Maayorku sheegay in inankii Gurigiisa joogay uu Imtixaamkan dhacay uuna ku qanacsanyahay isla markaana uu si cadaalada u dhacay. Waxaanuu Mayor Maydhane Ballanqaaday in wixii dhaqaale ah ee haayadu bixiso maahaane wixii kale Dawlada Hoose ee Boorama ay kabto.
Gababagadii Maayorka ayaa dardaaran u soo jeediyay dhalinyardaa sheegayna inay daacad ka noqdaan Hawshaa culus ee ay masuuliyadeeda qaadeen.
Ugu dambayn waxaa halkaa ku soo baxay 25 Xubnood oo 21 ka mid ahi ay yihiin Dab-demiyaal [ Fire Mans ] iyo 4 Darawal.